Qaramada Midoobay oo mar kale soo Bandhigtay Magacyada labo Sargaal oo kamid ah Qaswadayaasha Soomaaliya .	| warsugansomaliya.wordpress.com
warsugansomaliya / July 23, 2013
Q/W, Mohamud ismail hashi
July 23, 2013 in Home, warka.
← Xukuumadda oo heegan kii ugu darnaa galisay Ciiddamadeeda. (Warbixin Muhiim ah).
Aqri magacyada Rag loo toogtay dil ay horay ugu geesteen Sheekh Caan ah xilli uu salaad dukanayay →